Mamwe matatu Masikati Emmy Mipiro yeApple TV + nhevedzano yevana | Ndinobva mac
Kubva pakatanga Apple TV +, Apple yagara ichitsigira zvemukati zvemhando. Zvichakadaro, iyo mari ichiri kuonekera nekusavapo kwayo. Asi zvirokwazvo hunhu huripo uye kana zvisina kudaro ngavataurire Ted Lasso uyo atove mumwaka wake wechipiri uye zvechokwadi achagamuchira mibairo mizhinji sekutanga. Izvozvowo zvakaitika kune mamwe akateedzana evana anowanikwa pane chiteshi. Ivo vakapihwa ne Masikati Emmy Makomborero.
Apple TV yakaunganidza mimwe mibairo, uye inoramba ichiunganidza mibairo yehurongwa hwevana vayo muwechipiri wave Masikati Emmy Makomborero yakapihwa Mugovera wadarika. Nhepfenyuro inorarama, iyo yekutanga hafu yemakumi mana nemasere ezuva reZuva Emmy Awards yakanangana nehurongwa hwevana uye mifananidzo. Iyi firimu "Pano Tiri: Mazano Ekurarama paPlanet Earth" yakahwina kusarudzwa kwayo kwe "Yakasarudzika Yakakosha Kirasi Masikati Masikati Hupenyu Chirongwa."
«Zvichiri mvura"Chiratidziro chinodzidzisa kufunga kwakawedzera kune Peabody Award yayo nekuhwina kwe'Enificent Editing yeAn Animated Preschool Show, 'kunyangwe yakagamuchira mazita mune mamwe mapoka akati atadza kukunda." Vabatsiri vaikudzwawo nemasarudzo mumapoka akati wandei, asi pakupedzisira vakatadza kuwana mubairo. Nhepfenyuro yeMugovera yaive yechipiri pamitambo mitatu yeZuva Emmy ya2021, mushure mekutanga kutepfenyurwa muna Chikumi 25.
Ehezve, Apple TV + kwayinoenda, inokunda. Tiri kujairira nhepfenyuro dziripo paApple Tv + ichitambira mibairo uye rukudzo. Gore rakapera akatowana mibairo yakafanana uye gore rino anoigashira zvakare. Kusimbisa kuti mhando inoenderera uye kuti icharamba ichienderera gore negore. Kunyanya neshanduko dzakaitika muvashandi vari kutarisira Apple Tv +.
Tichava vakateerera mibayiro yemberi iyo inogona kugamuchirwa neApple's online online division.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Matatu Mamwe Masikati Emmy Mipiro yeApple TV + Yevana Series
Gurman anoti MacBook Pros nyowani ichavhurwa zhizha rapfuura